I-Tennis Court Cottage, inokuthula futhi iphumule
Hillcrest, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
Isekelwe maphakathi ne-Hillcrest, i-Tennis Court Cottage iyindlu engadini esanda kulungiswa, yokuziphekela etholakala endaweni evikelwe kahle ngaphakathi kwengadi eluhlaza, eluhlaza.
Indawo iyimfihlo futhi inokuthula, ifakwe zonke izinsiza ezidingwa yibhizinisi noma isihambi sokungcebeleka.
Ukuzihlola ngokwakho ukungena nokuphuma kuyashesha futhi kulula ngekhiphedi esangweni elikhulu, ibhokisi lokhiye litholakala emnyango weyunithi.
Abanikazi, u-Sean&Sally nokho basekelwe esakhiweni uma udinga noma yiluphi usizo.
USean & Sally bahlala kule ndawo kanye nezingane zabo ezimbili ezincane kanye nenja yakwa-Boxer enobungani okuthiwa u-Bizzie.
Uzopaka ngaphakathi kwendawo bese uwela inkundla yethenisi uye endlini encane. Indawo ifaneleka kakhulu kumhambi oyedwa, nokho ifanele umbhangqwana.
Uzongena endlini encane ngegumbi lelanga, okuyindawo enokuthula ongazipholela kuyo, libheke ingadi enhle futhi linendawo engaphezulu kwetafula yokubamba umsebenzi othile. Igumbi lokulala alikho elangeni futhi linethezekile ngombhede wabantu ababili, i-Smart TV nesikhala sekhabethe. Ikhishi elihlome ngokuphelele litholakala ngaphandle kwegumbi lokulala futhi kunefriji, i-microwave kanye nesitofu sokungenisa izinto. Kunikezwa itiye nekhofi. Ikotishi linokufinyelela ku-WiFi ngoxhumano lwe-fiber.
Indawo yokulala ine-aircond / ifudumeza futhi ifakwe ifeni yophahla.
Ukuhlanzeka kuyinto ehamba phambili futhi ngenxa yalolu bhubhane olukhona manje lwe-COVID-19 futhi sihlanza zonke izindawo ngemva kokuba sezihlanzwe ngokuvamile, lokhu kuhlanganisa izinkinobho, amarimothi nezibambo zeminyango. Futhi okwamanje sihlinzeka zonke izihambeli ngesibulali magciwane samahhala esingasisebenzisa eyunithi.
I-Hillcrest iyindawo enamahlamvu, eluhlaza, sitholakala phakathi nendawo (ibanga lokuhamba) ukuya ezindaweni eziningi zezitolo, izikole, amapaki amahhovisi kanye nezikhungo zezokwelapha. Kuyindawo ekahle yabahambi abafuna ukuhlola izindawo ezahlukene KwaZulu Natal.
Kukhona amathilomu nezindawo zokudlela ezinhle phakathi kwamamitha angama-500 ukusuka endaweni yethu.
I-Watercrest Shopping Center ikude ngemizuzu eyi-10, i-Hillcrest Private Hospital iyimizuzu emi-5, i-Kearsney College ikhuphuka igquma futhi imizuzu emi-5, i-Highbury Preparatory School ihamba ibanga kanti iCurro Schools iqhele ngemizuzu emi-4.
Simi imizuzu engama-25 ngaphandle kweTheku kanye nemizuzu engama-30 ukusuka eMgungundlovu, ngakho-ke siphakathi nendawo kubasubathi beComrades Marathon.
Siyatholakala endaweni noma sithinteke kalula uma ufisa.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hillcrest namaphethelo